Ngaphandle nje kokuthi ubunjiniyela kanye Umbuso izinhlelo eziyisisekelo, okunikeza yayiyindawo ekahle endlini, kukhona ezahlukene ezingadumile kakhulu, kodwa abalulekile ukuze athole induduzo kusho ngcono isikhala ephilayo. Isethi evamile amadivayisi banesibopho izici ngamunye yesimo sezulu, kuhlanganise lokushisa, umswakama, ionization, nokunye. D. Zolo, okuvulekile umthengi izilaleli baba iyatholakala futhi ultrasonic Aromadiffusors, onikeza indlu izakhiwo ezithile elimnandi.
Le divayisi encane yasendlini ukuze sishaye indawo ye isinyathelo amafutha abalulekile. Ngesikhathi kokuhlinzwa, iyunithi futhi ulawula izinga umswakama, ngakho yokufuna yayo sizonikeza imisebenzi emibili ngesikhathi esisodwa. onobuhle Standard yalolu hlobo nge ngokuqhubekayo obuhlukahlukene umfutho ukukhulula umhwamuko, ayegcwele Iphunga eyayikhethwe kusengaphambili. Eqinisweni, ngo-umsebenzi ofanayo isimiso kanye moisturizers, kodwa nge umehluko ambalwa. Uma liqhathaniswa nezibani eziklanyelwe ukuhlanganisa amanzi namafutha abalulekile, kulandele sishaye ingxube esiphelele. Kulokhu, umphumela ngokwayo pulverization akusilo obonakalayo iso. Umthelela kungafaniswa kwakukhuphuka inkungu noma isisi umgubuzelo, ogama ukuminyana is ivunyelaniswe nezidingo zamanje. Njengomthetho, ultrasonic Aromadiffusors imisebenzi kagesi kunethiwekhi futhi ngesikhathi ukugeleza kwamanzi ethangini izovala ngokuzenzakalela. Ngakho-ke kubalulekile ukubala ezingeni yokugcwalisa e indawana ekhethekile futhi ukukhetha idivayisi afanele ukusebenza olinganiselayo isikhathi sishaye.
Izici onobuhle ultrasonic
Okwamanje, izinhlobo ezimbili Aromadiffusors ethandwa. uhlobo umhlanga Okuningi eqolo kudivayisi, kodwa ngempumelelo ngaphansi futhi zisebenza kahle. ama-apharathasi Ultrasonic libhekene kungenzeka yokunikeza "esiwuhogelayo" spray esihle amanzi axutshwe ngamafutha elimnandi. zesimanje lezi amadivaysi anemisila izinzwa ekhethekile ukuqapha ezingeni umswakama kanye nezinkomba ngomumo diffuser wedwa ungenza isinqumo ukushintshela kwimodi ezifanele wokusebenza. Kodwa le njongo ekuqaleni umsebenzisi kumele wenze amasethingi afanele nomswakama ipharamitha mkhawulo. Kwezinye onobuhle, inikeza ikhono lokulawula kanye namasistimu okusebenza imingcele kuye ngokuthi lokushisa. Okubaluleke kakhulu, i-ultrasound Aromadiffusors incane. ingxenye yayo obusebenzayo kuthatha isikhala okuncane, kanye Ubukhulu jikelele zinqunywa namandla ithangi - isilinganiso 100-120 ml. Manje ungakwazi upheqa onobuhle best emakethe.
Uphenyo imodeli Aic Ultransmit KW-009
Imodeli zasendulo ideskithophu Aromadiffusors ehlanganisa imisebenzi eminingana. Phakathi kwazo kunezinye sishaye ngqo kuphuma amafutha anephunga elimnandi, amafutha, ionization ngisho ukukhanyisa. Ukuze umsebenzi phambili, ultrasonic Aromadiffusors Ultransmit KW-009 edonsa ingxube njengenhlangano aerosol, le microparticles eyayinekheli izinto elimnandi. Nale ion sputtering negative ekhiqizwa, okuyinto ngezinto amathonya izici imvelo emoyeni.
Ongoti izixazululo zanamuhla kwezobuchwep kufanele alalelwa ukuguqulwa KW-017. It libhekene a Izilawuli touch-sensitive kanye umklamo ezihlangene. Nokho, amandla lokhu Phiko 60 ml kuphela, ngakho ukusebenza ngeke ukubala. Ngakolunye uhlangothi, i-lokulala kwengane noma ultrasonic Aromadiffusors KW-017 ukulingana ngokufanele. Lapho isixazululo elimnandi sekuphelile, ke ikhubaza othomathikhi ngaphandle kokungenela komsebenzisi.
Izibuyekezo imifanekiso kusukela URPOWER
Onjiniyela URPOWER 100 ngemililitha diffuser, okuyinto lungasetshenziswa egumbini lokuphumula noma ekhishini ku unomphela yokusebenza mode. Noma kunjalo, abasebenzisi abanolwazi akunconywa ukuzikhohlwa ukugcwalisa ithange. Prakthiza ebonisa ukuthi ukusebenza, uketshezi bome ngemva 6 amahora ukusetshenziswa kakhulu. Positive abanikazi abaningi bathola umuzwa kubangele izinga zokuhlobisa more kwalo mkhiqizo. Abaklami abahlinzeke therein 7 umbala ukukhanya imodi, okuzokwenza ulungise umoya ngoba ngendlela ethile - .. Relaxing, lokudala, romantic, njll Noma kungenzeka ukuba ukhethe imodi ingxubevange lapho Aromadiffusors ultrasonic izoshintsha isihloko ngezikhawu ezithile, ngaphandle kokuma lapho umsebenzi sputtering kuphuma amafutha anephunga elimnandi. Ngokuqondene nezinye izici, umshini libizwa olandelanayo kule ndaba. Ukugcizelela main ivuliwe isizukulwane lezithako ezinuka kamnandi ngaphandle kokuba nokwenzeka ionization futhi humidification esitebeleni okuyinto lwenziwa ngemuva mayelana umsebenzi oyinhloko.
Izibuyekezo imifanekiso kusukela InnoGear
Le nkampani inikeza multi-functional diffuser yokwelapha Essential 200 ml. Idivayisi enikeziwe nge timer ekhethekile ngawo ukulungisa izindlela yokusebenza - 1, 3 noma 6 amahora. Futhi, ngemva ukukhathala bohlu amanzi namafutha iyunithi ngokwayo sivaliwe kuze kuseshini esilandelayo. Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi inikezwa kulungiselelwa ezimbili inkungu evumela nendlela enembe kakhudlwana yokulawula kakhulu inqubo sishaye. NgokoMthetho we-izimfanelo zokuhlobisa imodeli akuyona muhle kangako. Abaningi bathi ukuklanywa izindlu, okuyinto ebiyelwe i Aromadiffusors kagesi ultrasonic. Izibuyekezo ukugcizelela imodeli ukuthungwa ukuthi organically angena ekointerer. By the way, umenzi uphawula ukuthi wonke isakhiwo wenziwe izinto okungenangozi, okwakhiwa kwalo ayiqukethe ezinobuthi futhi eziyingozi. Abanikazi washo amazwi afanayo okuncoma kanye nokusebenza kuthule diffuser, ukuqhathanise umphumela acoustic of hleba womuntu.
Izibuyekezo imifanekiso kusukela VicTsing
Model Cool mist humidifier kusukela VicTsing inkampani lunamandla ka 300 ml, okungenani lesi sici amehlo bakha ingxenye enkulu yabamemezeli kanti nabantu abahlosiwe. Amalungu basikisela ukuthi leli nani kwanele 10 amahora wokusebenza. Zonke ezinye babe ejwayelekile yokusebenza izindlela ezahlukene isikhathi Slots senzo. Izici ezikhethekile zihlanganisa ngaphandle izinga kwesakhiwo, esimelela out le ultrasound Aromadiffusors. Ukubuyekeza, ngokukhethekile, waphawula ifomu elungiselelwe sikebhe futhi khona izinyawo ezintathu, hhayi okuvumela diffuser ukuba Pheqa. Ngaphezu kwalokho kwesigubhu capacious akwephuli umklamo isikhundla ukuzinza, ifomu egcwaliswe ngisho lenyusa kusimama.
Aromadiffusors choice esifanele zingenziwa, inqobo nje uma isimo nemibandela emsebenzini wayo. Ukuze ukusetshenziswa okuqhubekayo kuyinto efiselekayo ukuthola imodeli, amandla awo akuyona esingaphansi 100 ml. Futhi ukuzicabangela xaxa ozikhethela evumela ukulungisa izilungiselelo umniningwane yomculo. ukunakekelwa okukhethekile ikhokhelwa izimfanelo zokuhlobisa. Futhi ngokuya kukhethwa imibala, kokuhlaziywa izici sokukhanyisa kufanele esekelwe ekubukekeni kwendawo target wezangaphakathi, lapho kuhlelwe ukuba usebenzise i Aromadiffusors ultrasonic ngokuqhubekayo. Ngeke kube engadingekile ukunikeza impilo nokuphila kahle izici. I ionization efanayo lapho esiza zokuthuthukisa inani layo likwenza ubone, kodwa umphumela wokusebenza, ngokuvumelana abasebenzisi eziningi, kuwufanele izindleko.
Amadivayisi ezingabizi kakhulu isithokela etholakalayo at yizinkulungwane 1-1.5. Hlikihla. Le divayisi encane ngaphandle imisebenzi eyengeziwe futhi ephethe umthamo ithangi encane. Ingxenye phakathi inikeza isibonelo umthamo 100 ml. Lezi zihlanganisa i-ultrasound Aromadiffusors Ultransmit, okuyinto kuncike nguqulo ulingana lenkulungwane 2-3. Amamodeli yalolu hlobo ebekelwa isethi isilinganiso ongakhetha kanye ukulungiswa amathuba. Futhi kukhona lonke ingxenye lulwimi professional noma iziteshi aromatherapy. Amadivayisi anjalo abe yamandla aphezulu spray, nge lemiqulu emikhulu yamanzi amathangi kanye operation okuzenzakalelayo. Ezimakethe amadivayisi enjalo zingaphezu 10 eziyinkulungwane.
Ngo indlu yesimanje, Kwakugcwele amasu ahlukene futhi imishini kungase kubonakale Overkill ukuyisebenzisa, Uma unganakile, akuzona izinsimbi zomculo saziso. Ngempela, flavorings umsebenzi Ungashintshanisa ingadi encane njengoba "Abaphilayo" endaweni. Kodwa akubona bonke izitshalo zasendlini asalokhu ngempumelelo ngokuya imiphumela Wellness okuphumuzayo. Ngakwelinye ihlangothi, Aromadiffusors ultrasound kudingeka okungenani ube isikhala ekamelweni, ngaleyo ndlela uqede ngisho kokuhlupheka amasevisi angeziwe. Kudinga umsebenzisi ngesikhathi esifanele izikhathi 1-2 ngosuku ukugcwalisa ithange ngamanzi kanye amafutha abalulekile. Futhi kuphela uma ukusebenza okuqhubekayo, ngoba kudingeka amahora 2-3 kuphela diffuser sigcwaliseke ngokuphelele umgomo wayo. Ukuze lokhu kufanele wanezela umsebenzi zokuhlobisa amadivayisi ezinjalo. Futhi ukubukeka nokuthi kuwe kutholakele ukukhanyiselwa - konke lokhu, kuhambisana umphumela aromatization kunomphumela omuhle evumayo kudivayisi umoya ngokwengqondo indlu noma ifulethi.
"Izinhlangano" Guy. izici Jikelele nomlando nesenzakalo